TOMATO ELENA F1: SHARAXAADA KALA DUWAN, SIFOOYINKA, SAWIRADA - BEER CAGAARAN
Waxyaabaha kala duwan ee caan u ah - yaanyo Elena F1
Yaan cantoobe u doortaa beeritaanka xagaaga cusub? Wixii u bannaanka oo dhan oo aan haysan aqalka dhirta lagu koriyo oo raba kuwa yaryar si dhakhso ah u dhaqso oo si fudud u leh noocyo kala duwan.
Tamaandho Elena f1 waxay u adkaysantaa heerkulka heerkulka waxayna leedahay awood difaac adag oo ah fayraska tubaakada iyo meesha madow ee tubaakada.
Akhri faahfaahinta buuxda ee kala duwan ee dambe ee maqaalka. Sidoo kale waxaad baran kartaa sifooyinka tamaandhada, qaababka beerashada, ujeedka cuduradan.
Tamaandho Elena: sharaxaad kala duwan
Magaca dugsiga Elena F1
Sharaxaad guud Fasalka hore ee qummaatada ah ee tamaandhada ah ee beerista ee dhul beeran iyo koriyo
Foomka Miraha waa kuwo wada jira oo wareegsan, wax yar oo qallalan.
Midab Midabka midhihii bislaaday waa casaan.
Cunto dhexdhexaad ah 100-150 garaam
Noocyo dhaadheer 3-4 kg ka baadiyaha
"Elena F1" waa noocyo hore oo ka mid ah Bisaylkiisa, laga bilaabo beeritaanka geedo ilaa dhulka ilaa miro ay u bislaadaan waxaa lagama maarmaan ah in la sugo 90-95 maalmood. Iskudarin baadiyaha, shtambovy, 100-120 cm oo aad u sarreeya, gobollada koonfurta ku yaal ee lagu koriyo waxay gaari karaan 130 cm, waxay soo saartaa wax wanaagsan oo ka mid ah ciidda aan la ilaalin iyo filimka hoostiisa.
Waxay leedahay cilad aad u sareysa oo ah phytosporosis, fayraska tubaakada iyo meel madow oo tubaako ah..
Midab si buuxda u kobcay miraha midab casaan leh. Qaabku waa wareegsan yahay, isku dhaw yahay, wax yarna waa la qabadsiiyaa. Maqaarku waa khafiif, adag yahay, dhalaalaya. Dhadhanka ayaa sarreeya, dhadhanka waa wax fiican, macaan iyo dhanaan, oo ah nooca yaanyo.
Miraha dhexdhexaadka ah ama yar yar laga bilaabo 100 illaa 150 garaam, iyadoo goosashada ugu horreysa ay gaari karto 170 garaam. Tirada qolalka 4-5, maaddada qallalan ee 3-4%. Beergooska bislaaday wuxuu u dulqaadanayaa gaadiidka si fiicanna u roonaa haddii miraha la yareeyo wax yar oo aan qaan gaadhin.
Elena 100-150 garaam
Hybrid "Elena F1" waxaa lagu ridayaa Ruushka 1999-kii, waxaa la siiyay diiwaangelin goboleed oo kala duwan oo lagu taliyey hoyga filimada iyo dhul furan 2000-kii. Tan iyo markaas, waxa ay ahayd dalab joogto ah oo u dhexeeyay beeraleyda iyo beeralayda.
Natiijooyinka dhalidda ugu sareeya ee ciidda aan la ilaalin ayaa lagu bixiyaa gobollada koonfurta. Beerta ugu wanaagsan waxaa laga heli karaa Astrakhan, Belgrode, Voronezh, Crimean iyo Caucasus. Jidka dhexe ee loogu talagalay goosashada ballanqaadka waa ka fiicnaanshaha filimkan kala duwan. Meelo badan oo waqooyiga ah ee dalka ayaa waxaa lagu koray oo kaliya lagu koriyo.
Mirena Cun oo yaryar oo noocyo kala duwan leh "Elena F1" waxay u muuqan doontaa mid aad u fiican oo ku filan oo dhan. In foosto salting kuwan yaanyo sidoo kale waxay noqon doontaa mid aad u wanaagsan.
Foomka cusub waxaa wanaagsan in la isticmaalo saladh qudaar ah, koorsooyin koowaad, oo lagu daro khudaarta kale. Iyadoo ay sabab u tahay heerka sare ee fiitamiinada iyo dhadhanka dheelitirka, waxay sameeyaan casiir aad u caafimaad leh oo dhadhan fiican leh. Cagaar iyo baradho la shiiday waxay ku kala duwan yihiin dhadhan fiican.
Xaaladaha wanaagsan, 3-4 kg ayaa laga soo qaadi karaa hal baadiyaha.. On apt. m lagula talinayaa in la beero wax ka badan 3-4 dhirta. Waxay ka soo baxaysaa 11 kg, gobollada koonfurta iyo aqalka dhirta lagu koriyo waxay gaari kartaa 15 kg. Tani waa qiyaas ku filan oo dhalid ah.
Elena 3-4 kg halkii geedka
De Barao Giant 20-22 kg geedka
Polbyg 4 kg geedka
Kostroma 5 kg baadiyaha
Suumanka dufanka leh 5-6 kg halkii geedka
Bella Rosa 5-7 kg halkii mitir labajibbaaran
Waxaan soo saarnaa maqaaladaa fiiro gaar ah oo ku saabsan noocyo sarreysa iyo cudur-u adkaysta noocyo yaanyo ah.
Iyo sidoo kale ku saabsan yaanyada kuwaas oo u adkeysanaya dabaylo goor dambe iyo hababka waxtar leh ee ka hortagga cudurkan.
Fiiri sawirka: yaanyada Elena F1
Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee kala duwan ee "Elena F1" waa:
ku haboon kooxaha kooxaha ilaalinta;
aan qabin xaalad dibadeed;
muuqaal qurux badan;
caabbinta wanaagsan ee cudurrada caadiga ah ee yaanyada ee lagu koriyo.
Waxaa ka mid ah dhibaatooyinka, waxaa la ogaaday in dadka degan kuwa aan fiicnayn inta badan ay ku adagtahay jarjarka jirridda iyo taageerida hoosteeda. Wuxuu u baahan yahay ciid wanaagsan nafaqada iyo waraabinta joogtada ah.
Ka mid ah sifooyinka kala duwan, bannaanka u ah iyo beeralayda xusuusta difaac sare ee cudurada of "Elena F1" kala duwan. Waa in sidoo kale la ogaado dhalid wanaagsan, dhadhan fiican leh iyo muuqaal qurux badan. Seeds lagu beeray dhamaadkii Maarso. Dhalasho soo saarey wajiga 1-2 caleemo run ah. Qalabka warshadda waa in lagu xoojiyaa ulaha ama trellis, burushka culus wuxuu u baahan yahay in la hagaajiyo.
Gaariga ugu horeeya wuxuu u baahan yahay in la sameeyo marka dhirta ay gaarto dherer 20 cm. Haddii yaanyo "Elena F1" lagu beeray hoyga aqalka dhirta lagu koriyo, baadiyaha waxaa la sameeyay laba laba afkeel, oo ah dhul furan oo saddex ah. Ciidda uma baahna diyaarin gaar ah, laakiin ciidda waa inay ahaato mid wanaagsan oo la bacrimiyo.
Dhammaan marxaladaha koritaanka, waxay si fiican uga jawaab celinayaan bacrimiyayaasha caadiga ah iyo kiciyaasha kobaca.
Kuwa soo koraya yaanyo Elena F1 marar dhif ah waa inay la tacaalaan cudurrada. Waxay badanaa u dhacdaa si looga hortago. Tallaabooyinka sida: koriinka lagu koriyo, daawashada waraabka iyo nidaamka iftiinka, dabcinta ciidda waxay u adeegi doontaa sidii looga hortagi lahaa cudurada.
Tan ugu muhiimsan, waxay ka takhalusi doontaa baahida loo qabo isticmaalka kiimikada marka ay timaado xanuun. Natiijo ahaan, waxaad heleysaa alaab nadiif ah, oo aan dhib lahayn jirka.
Slugs waxay sidoo kale dhaawici kartaa dhaawacyo waaweyn oo duurka. Waxay ku dhibtoonayaan in ay ka saarto boodhka xad-dhaafka ah iyo berriga beerta, oo abuuraya jawi aan loo dulqaadan karin degaankooda. Sidoo kale qiyaas wanaagsan oo difaac ah ayaa noqon doona ciid adag, dhulka qolofta ah ee ukunta ama ukunta, waa in lagu kala firdhiyaa dhirta si loo abuuro caqabada la rabo.
Macaamiil joogta ah oo aan la aqbalin ee aqalka dhirta lagu koriyo ama aqalka dhirta lagu koriyo ayaa ah mid la jarayo, sidoo kale Bison ayaa sidoo kale loo isticmaalaa. Sida noocyo kale oo badan oo yaanyo ah ayaa loo soo bandhigi karaa cagaarka barafka, waxay la halgamayaan iyaga oo isticmaalaya daroogada "Confidor".
Sida aad u arki karto, tani waa noocyo kala duwan oo sahlan, oo leh xeer fudud oo daryeel, waxaad heli kartaa goosashada aad u fiican. Nasiib wacan iyo natiijooyin taajir ah.